Ukubuyekezwa komdayisi we forex
Idatha ye forexite yomlando - Idatha yomlando
Ngaphezu kwalokho, uhlobo eliyingqayizivele autism sikhathi, savakashela yenhlobo ye Savant syndrome, lapho izingane zingaba sithole amakhono eziyingqayizivele zale umculo, ubuciko kanye nezinye izindawo ngaphandle umsebenzi. Khangela ukuba iinkomo zinamathole angaphezulu, okanye zingekho phantsi kwemiba yabasebenzi. I- Exiland Backup Professional isekela isipele sedatha ye- multithreaded, isusa amafayela okuqala futhi iphindaphinda ama- backups kwamanye amadiski noma amaseva. Idatha ye forexite yomlando.
Lezi ukuntuleka abakhona kusukela zisencane, okuholela emtholampilo abalulekile ukungakhuli sokusebenza. Idatha yomlando izohlala itholakala emashadini nokukhishwa kwe- CSV.
Kuvame ukwenzeka, uma kufanele usebenze ngemininingwane eminingi, udinga ukwazi umehluko phakathi kwamaqoqo amabili wedatha yombhalo. Umsakazo Osemthethweni we- NAB Show, Umkhiqizi we- NAB Bonisa LIVE NAB Bonisa Izindaba: Ubunikazi bokusakaza, i- TV ne- Radio Technology kanye ne- Post Production News.
Fone yamathuluzi ye- iOS – isofthiwe jikelele ukulawula idatha ye- iOS. Novemba 29, : Ushintsho " Ekufakweni kwamanje ngumsebenzisi, " " Ukufakwa kwamanje ngedivayisi, " " Nenani lokufakwa ngumsebenzisi" Kusukela ngomhla ka- Novemba 29,, sizothula isimo sokunquma esisha sokubala amamethrikhi womsebenzisi nowokufaka ukuze kubhekelwe abasebenzisi namadivayisi ayeka ukusebenza.
Idatha ekhiqizwa nge- Google Analytics ingaxhunywa, yikhasimende le- Google Analytics noma yi- Google, kusetshenziswa ubuchwepheshe be- Google, ukuya kumakhukhi wenkampani yangaphandle, ngokuhlobene nokuvakasha kwamanye amawebhusayithi, isibonelo uma umkhangisi afuna ukusebenzisa idatha yakhe ye- Google Analytics ukuze adale izikhangiso ezihambisana kakhulu, noma ukuhlaziya ngokuqhubeka idatha yakhe. Isofthiwe ingacindezela ama- backups ibe yi- ZIP archive ngenkathi ulungisa izinga lokucindezela, uhlukanise ingobo yomlando ibe yi- volumes bese ubhala.
Isisombululo esilula sokwazi masinyane uma idatha isethi ibheka ngokufanayo noma cha, noma ukuba nombono ogqamile wemigqa ehlukene, ukusebenzisa i- Notepad + +. Lolu ulwazi olunikeza kithi olukhomba wena siqu, olufana negama lakho, ikheli le- imeyili, noma ulwazi lokukhokha, noma enye idatha engaxhunywa ngokuzwakalayo kulwazi olunjalo lwe- Google, olufana nolwazi esiluhlobanisa ne- akhawunti yakho ye- Google.
Isofthiwe iqukethe isethi enkulu amamojuli, ngamunye unesibopho izenzo ezithile ngesikhathi umsebenzi ngedatha kudivayisi. Uma une- akhawunti ye- Google, singase sibonise igama lakho lephrofayela, isithombe sephrofayela, nezenzo ozenzayo ku- Google noma kuzinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle ezixhumene ne- akhawunti yakho ye- Google ( njengokubekiwe + 1, izibuyekezo ozibhalayo ngisho namazwana owathumelayo) kumasevisi wethu, kufaka phakathi ukubonisa kuzikhangiso nokunye okuqukethwe kwezentengiso.
I- NAB Bonisa Izindaba nge- Broadcast Beat.
I sql yeseva ye database yekhodi yomthengisi inikwe amandla
Indlela yokubhalisa inkampani yokuhweba forex